Ngabe u-Elon Musk angaba nohlelo olukhulu lweBitcoin? I-crypto observer iyahlaziya
I-Crypto Observer ikholelwa ukuthi uMusk uhlela ukusebenzisa iBitcoin ukuheha abasebenzisi abaningi emandleni avuselelekayo.
I-Tesla ithola "izikweletu zemvelo" ngokuthengisa izimoto zayo ezingama-zero-emission, ezinye zazo ezithengiselwa abenzi bezimoto abangakabi nazo izimoto ezingakhiphi zero.
Isikhulu esiphezulu seTesla u-Elon Musk ube yisisusa esiyinhloko empini yakamuva ne-Bitcoin ezinyangeni ezisanda kwedlula. Ithonya lakhe kuzimpahla zedijithali laqala lapho ememezela ukuthi uTesla uzokwamukela iBitcoin njengendlela yokukhokha. Lokhu kuphushe intengo yaze yafika kurekhodi eliphakeme lama- $ 64,000. Ngenkathi injabulo isesephezulu, u-Elon Musk wenza enye i-tweet ememezela isinqumo sikaTesla sokumisa ukumisa izinkokhelo zeBitcoin. Intengo yeBitcoin ikhishwe ezansi ngaphansi kwe- $ 40,000 ekuphenduleni. Abathandi abaningi beBitcoin bahlala behlambalaza uMusk,
nomqaphi we-crypto okhonjwe njengoCroissantEth ucabanga ukuthi uMusk angaba necebo elikhulu. > I-Ark Invest, ongomunye wabaninimasheya abakhulu bakaTesla nomtshalizimali weBitcoin, usanda kukhipha umbiko ngamandla elanga nezimayini zeBitcoin. Ngokusho kweCroissantEth, lo mbiko unikeza umkhondo 'endgame' yebhizinisi likaMusk. amandla akhiqizwa ezintweni ezivuseleleka ezingenayo ikhabhoni.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ibhizinisi likaTesla eliyinhloko ngamapaneli elanga, uphahla lwelanga namabhethri. Ngokusho kwe-Observer, izifundazwe ezingaphezu kwezingu-13 e-United States zidinga ukuthi izimoto ezithengiswe esifundazweni sazo zingabi nomoya ongcolile. UTesla wenza imali eningingoba ithola "izikweletu zemvelo" ngokuthengisa izimoto zayo ezingama-zero-emission, amanye ala makhredithi athengiselwa abenzi bezimoto abangakabi nazo izimoto ezikhiqiza uziro.
Kimi, kubonakala sengathi kungenzeka kakhulu ukuthi uTesla maduzane azomemezela indlela evuselelekayo yokwenza imayini ye- $ BTC ngokusebenzisa amandla athe xaxa akhiqizwa izindonga zikagesi, ezingasetshenziswa yinoma ngubani onophahla, izimpawu, izimoto zeTesla nokuningi!
I-CroissantETH ithe inhloso kaMusk ye-SpaceX ukudala umphakathi ozinzile ku-Mars. Njengoba i-solar ingumthombo oyinhloko wamandla ku-Mars, i-BTC ingaba yimali ekahle. Uhlelo lwayo olukhulu ukusebenzisa iBitcoin ukuheha abasebenzisi abaningi ukuthi bavuseleleke.
Ucabanga ukuthi uMusk akananhloso ye-FUD Bitcoin.
Ngokombiko, iBitcoin ingahle ibuye njengoba abaningi bengabuyela emakethe.isikhukhukazi siyenzeka.